विलिरुविन रक्तकोषको विर्सजन वा खण्डन हुँदा प्रत्युत्पादक पदार्थको रुपमा उत्पन्न हुन्छ । मुख्य हिम प्रोटिनको रुपमा रक्तकोषमा रहेको हेमोग्लोविन खण्डित हुँदा प्रति १ ग्राम हेमोग्लोविन बराबर करीब ३४ मिलिग्राम विलिरुविन उत्पादन हुन्छ । रक्तकोषबाट धेरैभन्दा धेरै हेमोग्लोविन खण्डित हुने अवस्था अथवा हेमोलाइसिस हुने अवस्था असामान्य वा प्याथोलोजिकल हो । जस्तै रक्तकोषको खराबी, रिसस व्लर्ड ग्रुपको असामान्जस्यता, रक्तश्राव वा रक्त संकलन(हिमाटोमा वा ब्रुजिङ्ग) वा रक्तकोषमा इन्जाइमको कमिलाई असामान्य प्याथोलोजिकल भनिन्छ । तथापि सामान्य अवस्थामा उमेर पुगेका रक्तकोष खण्डित हुँदा पनि विलिरुविन उत्पन्न हुन्छ, यसलाई फिजियोलोजिकल भनिन्छ । रक्तकोषको निर्माणका क्रममा बोनम्यारोमा बनेका अपूर्ण वा असामान्य कोष छिट्टै खण्डित हुन्छन् र त्यसबाट पनि बिलिरुविन उत्पन्न हुन्छ । यसरी उत्पन्न भएको विलिरुविनलाई रगतमा रहेको एल्बुमिनले कलेजोसम्म पु¥याउछ । जहाँ विभिन्न चरणका मेटाबोलिक प्रक्रियाहरुले कन्जुगेट गरेर बनेको कन्जुगेटेड बिलिरुविन पित्तथैली एवम् पित्तमार्ग हुँदै पित्तको रुपमा आन्द्रामा प्रवेश गर्दछ । जसका कारण सामान्यतया दिसाको रङ्ग पहेंलो हुन्छ । यो पित्तले चिल्लो पदार्थ पचाउने काम गर्छ ।
– विलिरुविनको धेरै उत्पादन ः रक्तकोषको आयु १२० दिनभन्दा कम हुने र धेरै रक्तकोषको लोड हुनाले ।
अब जोडिने भो- कृष्ण वलिको खुट्टा, ४ लाख सहयोग दिदै शिशिरले रुपाको खुट्टैमा ढोगे.. (भिडियो)
जान्नै पर्ने – पिनास के कारणले हुन्छ ? कसरी बच्ने ? के खाने-के नखाने ?